Maxay tahay caqabadda weyn ee hortaagan heshiiskii uu Paulo Dybala ugu wareegi lahaa Kooxda Manchester United? – Gool FM
(Manchester) 31 Luulyo 2019. Sida wararku ay sheegayaan waxaa caqabad weyni ay soo wajahday heshiiskii uu Paulo Dybala ugu wareegi lahaa kooxda Manchester United, iyadoo la isku mari waayay wahadallada mushaharkiisa.
Weeraryahanka kooxda Juventus wakiilladiisa ayaa Manchester United kala hadlayey heshiiska shaqasiga ah ee ciyaaryahankan uu ugu wareegayo Old Traffrod ka hor inta uusan dhaqan gelin heshiiska isku bedelashada ah ee uu ciyaaryahankan qeybta ka yahay kaasoo Lukaku uu ku aadayo dhinaca kale, balse waxaa haatan la isku garan la’yahay mushaharka ciyaaryahankan uu ka qaadanayo Man United.
Waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in Lukaku uu saakay ka laabtay Magaalada London isagoo aaday dhinaca Manchester, maadaama uusan dhawayn dhammaystirka heshiiska, iyadoo ay suuro-gal tahay inuu xaadiro tababarka kooxda Man Utd ee Carrington.
Macalinka kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya in mustaqbalka Lukaku la xaliyo maanta si ay wakhti ugu helaan soo xero-gelinta bedelkiisa, sidaas waxaa daabacay Wargeyska The Sun.
Juve ayaa u muuqata mid Inter Milan ku garaaci karta saxiixa 26-sano jirkaan, iyadoo kooxda Marwada duqda ah ay diyaar u tahay inay Man United u bandhigaan Dybala, Mario Mandzukic iyo 10 milyan oo gini si ay u helaan xiddigan xulka qaranka Belgium.
Yeelkeede, heshiiskaas waxa uu ku xiran yahay in Dybala uu heshiiska shaqsi ah la gaaro Manchester United oo xilli ciyaareedka soo socda ka ciyaareysa tartanka Europa League, xilli xiddigaha Man United mushaharkooda laga dhimay 25%, maadaama ay ku guuldarreysteen inay u soo baxaan tartanka Champions League.
Xiddigan reer Argentina ee Dybala ayaana dalbanaya in la siiyo mushahar la mid ah kan xiddigaha waa weyn ee kooxda, isla markaana aan waxba laga dhimin mushaharkiisa, maadaama uu ka dheelayo tartanka Europa League, halka la wariyey in laacibakn uu mushahar qaali ah ka kaxayn karo Magaalada Turin, maadaama 25-sano jirkaan uu ku faraxsan yahay inuu sii joogo kooxda reer Talyaani.